Afarta wuxuush ee indhaha leh | Martech Zone
Kani waa filim madaxbannaan oo cajiib ah iyo laga yaabee mustaqbalka filiminta qaybinta. Waxaa loogu talagalay dadka sida wiilkayga oo kale ah, laakiin weli waan ku riyaaqay. Sheekadu waxay si sax ah u muujineysaa dhammaan jahwareerka ka imanaya xiriirka. Wey yara xanaaqsan tahay mararka qaarkood, laakiin waxaan u maleynayaa inay taasi macquul tahay (waana gaboobayaa). Fariimaha ka dambeeya filimka ayaa ah kuwo waqtigooda ku habboon isla markaana ansax u ah da 'kasta oo dhalinyaro ah, iyaga oo naftooda iyo dhalinyaradooda midba midka kale ogaada.
Agaasimayaasha hadda waxaa kafaala qaadaya Spout - qof kasta oo isqoriya, Spout wuxuu siin doonaa $ 1 si looga caawiyo bixinta filimka. Sidoo kale, ka website wuxuu leeyahay dukaan aad ka soo dejisan karto filimka, ka dalban karto DVD-ga, aad u heli karto shaati, iwm.
Trailer-ka Afarta Wanaag ee Indhaha
Filimka oo dhan waa la heli karaa 1 toddobaad Youtube. Waa filim qabow - iska hubi. Waxaan jeclaan lahaa inaan arko filim sidan oo kale ah oo dakhli ku filan u siiya agaasimayaasha inay sii wataan shaqadooda. Miyaanay taasi ahayn hab wanaagsan oo suuqgeyn iyo qaybinta filimada? Ma aaminsani inaad ka heli doontid filim daacadnimo iyo waaqica dhabta ah ee Waxbarshada Afarta ah ee shirkad kasta oo wax soo saar guud ah.
Tags: afar bahal indho sarcaad lehyoutube